Olee otú Hichapụ Old iCloud ndabere Online
> Resource> iCloud> Olee otú iji Hichapụ Old iCloud ndabere faịlụ
Ebe ọ bụ na ntoputa nke iCloud, ọzọ na ndị ọzọ ndị mmadụ agbasaghị iji iCloud ka mmekọrịta na nkwado ndabere data na ha iOS ngwaọrụ. Ọfọn, iCloud-abịa mgbe a price. Ọbụna ihe mbụ 5GB bụ maka free, ọ pụrụ ịbụ ezughị ịzọpụta gị niile data mgbe i nwere ọtụtụ iOS ngwaọrụ. Mgbe ahụ, ị ​​mkpa na-eji a ụfọdụ ego na mmezi nchekwa kwa afo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta ego a, e nwekwara a ụzọ na ihe mere ghara ihichapụ ochie iCloud ndabere onwe elu ohere na gị iCloud akaụntụ?
Hichapụ iCloud ndabere faịlụ na nzọụkwụ
Ọzọ, ka ego otú ka ihichapụ ndabere faịlụ gị iCloud akaụntụ. N'agbanyeghị ị na-eme nzọụkwụ n'okpuru na gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod aka, usoro bụ kpọmkwem otu.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka ida ndị backups, ị nwere ike họrọ ibudata na-azọpụta ha na mpaghara gị na kọmputa. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ gbasara nbudata iCloud ndabere ka kọmputa.
Nzọụkwụ 1. Chọta ndabere faịlụ gị iCloud
Ka malitere, malite Ntọala ngwa na ngwaọrụ gị. Mgbe ahụ gaa iCloud> Nchekwa & ndabere> Jikwaa Nchekwa. E ị ga-ahụ niile ọhụrụ ndabere faịlụ gị iPhone, iPad na iPod aka, nke na-jikọọ iCloud na otu Apple ID.
Nzọụkwụ 2. Họrọ nkwado ndabere na mpaghara ị na-achọghị na ihichapụ ya
Dị ka screenshot egosi n'elu, ị nwere ike ịhụ gị niile ọhụrụ backups na nchekwa nke onye ọ bụla. Ị nwere ike pịa ọ bụla na ihe ka ego ụbọchị nke ndabere faịlụ, nke mere na ị nwere ike ikpebi nke na otu onye bụ okenye. Dị pịa na ya na ị ga-ahụ ihe ọmụma dị ka ndị a.
Ọ bụrụ na nke a bụ onye ị chọrọ tụfuo, ị nwere ike ozugbo pịa na "Hichapụ ndabere" button iji nweta ya nkasi gị iCloud. Mgbe tapping bọtịnụ, ị ga-ahụ a ozi-arịọ IG ị chọrọ gbanyụọ nkwado ndabere na mpaghara ihichapụ niile ndabere data maka ngwaọrụ si iCloud dị ka ndị a.
Biko gosi ya site na ịme ọpịpị "Gbanyụọ & Hichapụ", na ị na-mere. Ihe atụ nke n'elu, m nnọọ zọpụta 3.1 GB nke nchekwa na m iCloud akaụntụ. Ị pụrụ ime ya na gị onwe gị iCloud akaụntụ ugbu a!
Download iCloud backups na kọmputa
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka ihichapụ ọ bụla backups, ị nwekwara ike ịhọrọ ibudata backups si gị iCloud na kọmputa. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike hapụ nchekwa nke gị iCloud na ọ bụghị ida ọ bụla data.
Iji mee nke a, i kwesịrị inwe onye na iCloud ndabere Downloader: Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery for Mac). Nke a software-enyere gị aka ibudata niile backups si iCloud ka ịhụchalụ na zọpụta na gị PC ma ọ bụ Mac. Download ikpe mbipute n'okpuru nwere a na-agbalị na mbụ.
Nzọụkwụ 1. Abanye gị iCloud akaụntụ
Mgbe na-agba ọsọ usoro ihe omume, ịkwaga "naputa site na iCloud ndabere File" n'elu nke isi window. Mgbe ahụ ị pụrụ itinye Apple ID na paswọọdụ iji abanye na gị iCloud akaụntụ.
Nzọụkwụ 2. Download na ike iṅomi ndị iCloud backups
Mgbe na-egbu osisi na akaụntụ gị, ị pụrụ ịhụ niile iCloud backups depụtara na window. Họrọ otu na pịa na "Download" button iji nweta ya ebudatara. Ebudatara faịlụ bụ naanị emi odude na kọmputa gị na ị nwere ike ihichapụ ya mgbe e mesịrị ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ya. Ozugbo nbudata zuru ezu, ị nwere ike na-amalite Doppler wepụ ya site na Doppler bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3. Save the iCloud data na kọmputa gị selectively
Mgbe iṅomi akwụsị, ị nwere ike ihuchalu niile data na iCloud ndabere ka e gosiri n'okpuru. Họrọ ihe ọ bụla ihe ị chọrọ ma ọ ha niile, wee pịa "Naghachi" na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Mgbe nbudata na chekwaa data, ị nwere ike amalite hichapụ ihe niile backups gị iCloud ka onwe nchekwa ugbu a.